प्रेम कि आसक्ति? — News of The World
चन्दा थापा (चन्द्रिका)चैत्र २२, २०७५
फिल्म हेर्ने बानी त्यति छैन । हेरिहाले पनि समाज परिवर्तनका सन्देश बोकेका फिल्महरुले मन असाध्यै तान्छ । त्यस्ता फिल्म आउँदा (नेपाली वा हिन्दी जे भएपनिं) छुटाउन मन लाग्दैन् । यस्ता फिल्महरु लाग्दा सम्पादक मिना शर्माज्यू र म हिडि हाल्छौं । केही फिल्ममार्फत देखाइएका सन्देश यस्ता हुन्छन् कि जो आफ्नो जीवनमा पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ ।
फागुनको पछिल्लो साता हिन्दी फिल्म ‘बदला’ आएको थियो । ( ८ मार्च) नारी दिवसका दिन लागेको बदला फिल्म पक्कै पनि सन्देशमुलक नै होला भन्ने लागेको थियो । फिल्ममा मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चनलाई बनाइएको थियो । उनी उक्त फिल्ममा वकिलको भूमिकामा रहन्छन् । उनी मुद्दामा कहिल्यै पनि हार्दैनन् । तर, घटना थाहा नभएका उनले आफूले बनाएको नाटकिय घटना सुनाउँदै आरोपिको मुखबाट सत्य निकालेरै छोड्छन् उक्त फिल्ममा । उनका फिल्म शायदै होलान जसले केहि सन्देश नदिएको होस् । फिल्मको पोस्टरमा उनको भूमिका मूख्य देखिएकोले नै त्यो फिल्मले हल सम्म जान तानेको थियो हामीलाई पनि ।
‘बदला’ सामान्यत एकले अर्कोलाई सताएको अवस्थामा, धोका दिएको अवस्थामा जोड्ने गरीन्छ । प्रतिशोध साँध्ने उद्धेश्यले घटाइएको घटनालाई नै ‘बदला’ को रुपमा लिएर उ माथि जाइ लागेर आफ्नो मन बुझाउनु लाइ पनि भनिन्छ । हुन पनि फिल्ममा त्यहि थियो । तर, मैले बुझे अनुसार फिल्मले अर्कोपनि जर्वजस्त सन्देश दिन खोजेको थियो त्यो हो, एउटा सानो गल्तिले कसैको पनि जीवन कसरी तहस नहस बनाउँछ भनेर ।
फिल्मको पात्र नायिकाले घरमा माया गर्ने श्रीमान अनि छोरी हुँदा हुँदै पनि बाहिरी युवकसँग प्रेम सम्बन्ध बढाउँछिन् । उनी विजनेस वुमन भएकाले विजनेसको सिलसिलामा हिडिरहनु पर्ने हुन्छ । श्रीमानलाई यो काम अनि यो सहरमा जान्छु भनेर उनी ती प्रेमिसँगै कुनै सहरको जंगलको बिचमा रहेको घरमा पुगेर रात बिताउँछिन् । पहिले देखिको सम्बन्ध र उनले ती युवकबाट छुट्कारा पाउन चाहेको जस्तो गरेकी थिइन्, त्यतिबेलै ।
एकरात सँगै विताएर उनीहरु आ–आफ्नो गन्तव्यमा जान फर्किन्छन् । बाटोको बीचमा आउँदा युवा (नायक) ले अर्को बाटोबाट जाउँ भन्छन् । गाडी नायिकाले चलाएकी हुन्छिन् । उनले गाडी मोडेर अर्को बाटोमा लैजान्छिन् । संयोगवश विपरीत दिशातर्फबाट आइरहेको कारमा उनीहरुको कार ठोक्किन्छ । उनीहरु कार रोकेर हेर्छन् । कारमा एक युवक बेहोस् भेटिन्छन् । उनीहरु युवक मरिसकेको अनुमान गर्छन् अनि नायक आफूले आफूहरुको गाडी चलाएर जाने र युवक सवार कार युवती –नायिका) ले लिएर जाने सल्लाह गर्छन् । युवकको शरीर सहित गाडी नदीमा फ्याकिदिने सहमति हुन्छ उनीहरुबीच । युवती कार लिएर नदीको बाटोतिर जान्छिन् । कारको डिक्कीमा युवकको शरीर रहेको हुन्छ । उनले डिक्की खोलेर हेरिन् । युवक जीउँदै थिए । उनले हात दिएर आफूलाई बाहिर निकाल्न अनुरोध गरे । तर, ती युवतीले फेरि डिक्की बन्द गरेर युवकलाई कारसहित नदीमा फ्याकेर फर्किन्छीन् । युवकको जीवन त्यहि समाप्त हुन्छ ।
उता कार चलाएर हिडेका युवक (नायक) बीच बाटोमा पुग्दापुग्दै गाडी रोकिन्छ । युवतीको गाडी भएकोले उनले कहाँ के समस्या भन्ने भेउ पाउँदैनन् । त्यहि समयमा अर्को गाडीमा एक दम्पत्ती त्यहिबाटो भएर आउँछन् । सहयोगी मनका उनीहरुले सोध्छन्, ‘के भयो, केही सहयोग गरौं ?’ संयोगले उनीहरु वर्कशप संचालक हुन्छन् । उनीहरु गाडीबाट झरेर युवकको गाडी बनाउने कोशिष गर्छन् । तर, आफूहरुसँग सामान नभएकोले आफ्नै वर्कशपमा पुगेर बनाइदिने भन्दै गाडीलाई डोरीले बाँधेर तान्दै युवकलाई आफ्नो कारमा लिएर जान्छन् ।
घर पुगेर युवकलाई पाहुँना जस्तै सत्कार गरेर चिया कफी खुवाउँछन् । आफ्नो छोरा पनि बिहानैदेखि बाहिर निस्किएको र अवेर सम्म घर नफर्केको भन्दै फोन लगाउँछन् । फोन घरमै बज्छ । ती युवकको फोन नायकले आफ्नो खल्तीमा बोकेर आएका हुन्छन् । उनले तत्काल जुक्ति निकाल्छन् र आफू बसेको सोफा मुनि मोबाइल रहेको भन्दै निकालेर दिन्छन् । त्यतिबेला उनलाइ थाहा हुन्छ कि, उनीहरुले दुर्घटनामा पारेका गाडी त्यहि घरका छोराको रहेछ । मरेका युवा उनीहरुका एक्ला छोरा रहेछन् । त्यो थाहा पाउना साथ उनी आत्तिन्छन् । अनि बाहिरीन हतारिन्छन् ।
उता युवतीले ती युवकलाई कारसँगै नदीमा फ्याकिदिइन् । उनले उक्त युवकलाई बचाउन सक्थिन् । तर, कानुनी झमेलामा फस्नुपर्ने तथा श्रीमानलाई छलेर आफू अर्कै सहर र अर्कै युवकसँग रहेको पोल खुल्ने डरले सबै सवुत मेटाउनका लागि उनले त्यस्तो गरेकी हुन्छीन् । वास्तवमा उनले ती युवकलाई बचाएर ती सबै घटनाबाट पार पाउन सक्थिन् । तर, ‘विनासकाले विपरीत बुद्धि’ भनेजस्तै त्यस घटनापछि उनीहरुको जीवन झन उल्झनमा फस्दै गयो ।
उनले युवकसँग एक रात विताएर माया गर्ने आफ्ना श्रीमान र छोरीलाई धोका दिन नहुने भन्दै गल्तीको पश्चाताप गर्दै ती प्रेमिसँग कहिल्यै नभेट्ने भनेर छुटिन्छीन् । तर, त्यसपछिका घटनाहरु सिलसिलेवर बन्दै जान्छन् र दुईजनाको भेट भइरहन्छ । घटना चरम उत्कर्षमा पुगेपछि ती युवतीले आफ्नो प्रेमिको ज्यान लिएर सबै सबुत मेटाउन चाहान्छिन् । तर उनी यसबाट उम्कन सक्तिनन् अन्तत कानुनको कठघरामा पुर्याउँछ ।
यी फिल्मी कहानी जस्तै घटना नेपाली समाजमा पनि धेरै घटिरहन्छन् । सामान्य चिनजान, भेटघाट, सोसियल मेडियाबाट चिनजान भएर सुरु भएको सम्बन्ध कतिपय अवस्थामा भयानक र दर्दनाक घटनाहरु घटाउने अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । बदलाकी नायिकाको पनि त्यहि थियो । श्रीमान्सँग राम्रो सम्बन्ध रहँदा रहँदै पनि आकर्षण र आशक्तिका कारण आफ्नो जीवन उल्झनमा पार्दै गइन् उनले । सबै भएकी उनलाई प्रेमिको आवस्यकता किन थियो भन्दा आशक्तिनै हो कि भन्नेमा पुग्न सकिन्छ । उनी श्रीमानको माया, सम्पत्ति, सन्तान सबै कुराले भरिपूर्ण थिइन् । त्यसैले त ती युवकसँग रात बिताएपछि अब कहिल्यै नभेट्ने र आ–आफ्नो पारीवारीक जीवनमा दखल नदिने सम्झौता गरेर टाढिन खोजेका थिए । तर, उनीहरुले पाएनन् ।
फागुनको तेस्रो साता एक घटनाले सामाजिक संजालको ग्रुपमेलमा धेरैको मन कुडायो । ग्रुपमार्फत् सबैको सामाजिक संजालमा पुगेको एक युवतीको फोटोले सबैको मन झस्काइदियो । अभिभावक मात्र नभएर कलेज पढ्ने युवायुवतीको पनि यसले त्रसित बने । आफूसँग सँगै कलेज पढ्ने युवतीसँग बसेको प्रेम र त्यसपछि उत्पन्न भएका आवेशले युवकलाई युवतीको घर सम्म पुर्यायो । उनले घर पुगेर गाली मात्र गरेर मन शान्त बनाएनन्, युवतीको गाला चक्कुले चिरेर रगतपिच्छे बनाएर छोडे । पछि उनले आफूले गल्ति गरेको भन्दै कसैलाई नभन्न र औषधि उपचार पनि आफै गरिदिने भनेर युवतीलाई फकाएका थिए ।
त्यस्तै अर्को दोस्रो घटनाले पनि जीवनको आधा उमेर वितिसक्दा पनि यति बिघ्न आशक्ति किन, जसले आफ्नो जीवनै गुमाउन र जीवन जोखिममा पार्न उद्धृत हुन्छन् भनेर देखाउँछन् । ५० वर्षकी ओमकुमारी र ४६ वर्षीय नुर बहादुरबीच यस्तै आशक्ति देखिएको छ । जीवनको आधा उमेर विताइसक्दा उनीहरुबीच बसेको प्रेम सम्बन्धले ओम कुमारीको ज्यान लियो भने नुर बहादुरलाई जिन्दगीभरका लागि जेल पु¥यायो । ओम कुमारीले दुईवर्ष देखिको सम्बन्धलाई बैधानिक दिनका लागि विवाह गर्न दवाव दिएकी थिइन् । आफ्नो उद्धेश्य पूरा गरेपछि ओम कुमारीबाट टाढिन खोजेका उनी आफ्नो अवैध सम्बन्ध लुकाउनका लागि घर छोडेर कतै जाउँ भनेर ओम कुमारीलाई लैजान्छन् र, बीच बाटोमै रड प्रहार गरेर ओम कुमारीको इहलिला समाप्त पारिदिन्छन् । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको घटना हो यो । जुन बिहिबारका मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो । क्षणभरको यौन आशक्तिले एकको जीवन समाप्त र एकको जीवन बेकामे रहेर जेलमा बित्ने भयो ।
यस्तै अर्को तेस्रो घटना यहा. सान्दर्भिक छ । सामाजिक संजाल फेसबुकमा खेल्दा खेल्दै कोरियामा कार्यरत एक नेपाली युवा र नेपालमा एक गृहिणी महिलामा प्रेम सम्बन्ध बढ्दै गयो । उता कोरियाको एक्लोपन र यता फुर्सदमा रहेकी घरबारे महिलाबीच फेसबुक च्याटमै घनिष्ठता बढ्दै गयो । उनीहरुले एकअर्काको संवेदनशील अंगको फोटो साटासाट गरे ।
कोरियामा मजदुरी गरेर कमाएको युवकले केही पैसा, मोबाइल, सामान पनि युवतीको नाममा पठायो । ‘धेरै भए पछि तितो हुन्छ अर्थात अति भए खति र खति भएपछि मति आउँछ’ भनेजस्तो भयो । युवतीको मनमा परिवर्तन आयो । उनले चलिरहेको अच्छा खासा परिवार र श्रीमानलाई धोका दिन नहुने भनेर युवकबाट बेलैमा टाढिन् खोजिन् । तर फेसबुक च्याटबाटै आफ्नो मनोरन्जनका लागि साथी बनाइएका युवकले छोड्न मानेनन् । अनि ‘म बाट टाढा भइस् भने तेरो श्रीमानलाई सबै म्यासेज र फोटो पठाइदिन्छु’ भनेर धम्क्याए । उनी त्यसबाट उम्कन सकिनन् । कुरा गर्दै जाँदा उनले ती युवकलाई ‘श्रीमान’ र युवकले ‘श्रीमती’ भनेर समेत सम्बोधन गरेका थिए फेसबुकबाटै । त्यसकारण पनि ती युवकबाट उम्कन नसकेकी उनी मानसिक पीडामा छन् अहिले । भन्छिन्, ‘कानुनी उपचार माग्न जाउँ भने समाज र परिवारले के भन्ला, त्यसपछि मर्नु न बाँच्नु हुन्छु कि, गल्ति स्वीकारेर पुरानै अवस्थामा फर्किउ भने ती युवकले बाँच्न दिदैनन् ।’ युवतीले पीडा सुनाइन् ।
त्यस्तै अर्को चौथो घटना जसले मलाइ यो पिडा ओकेल्नै बाध्य बनायो । मेरी साथीको छिमेकी एकल महिला हुन् । एकल महिला देख्दा वा उनका बारेमा नजिकबाट बुझ्नेले उनलाई कसैले साथ दिन्छु भने होलान् या कसैले प्रयोग मात्र गर्न खोज्यो उनले त्यो बुझ्न सकिनन् । काठमाडौंको ठाउँमा उनलाई घुमाउने, फिल्म देखाउने, राम्रो रेष्टुरेण्टमा खाजा खुवाउने, कहिलेकाँही परेको बेला सहयोग गर्ने अनि मिठो बोल्ने धेरै पुरुष भेटिए । उनलाई लाग्यो, सबैले आफूलाई साँचो माया नै गरेका होलान् । तर, उनले बुझ्न सकिनन् कि, उनीहरु केवल शारिरीक आकर्षण र आफ्नो उद्धेश्य पूरा गर्नका लागि सम्बन्ध बढाएका हुन् भनेर ।
केहिदिन अगाडि मात्र ती महिलाको कोठामा एक अर्धबैसे पुगे । ढोका बन्द थियो । धेरैबेर घन्टी बजाए । यताउता गरे । खुइय सुस्केरा हाले । अनि धेरैबेर ढोका खुल्छ कि भन्ने आसामा उनी कुरिरहें । तर, ती महिला त्यहाँ नभएको हुनाले उनी फर्किन बाध्य भए । फर्किदा उनले मेरी साथीलाई एउटा कार्ड दिदैं भनेछन्, ‘ बहिनी यो कार्ड उहाँलाई दिनुस् है,’ साथीले कार्ड समाइन र भनिन्, ‘अहिले उहाँ हुनुहुन्न राति भइसक्यो, भोली बिहानै दिन्छु ।’ तर उनले मानेनन् र भने ‘हुँदैन बहिनी आजै दिनुहोस् जरुरी छ । ’ त्यति भनेर उनी निस्किएछन् ।
मेरी साथीले काड वल्टाइ पल्टाइ हेरिछन् । कार्डको पछाडि खाली भागमा इङ्लिसमा लेखिएको थियो, ‘आइ एम होपफुल यु आर इन्जोइङ दिस इभिनिङ भेरी मच बाइ’ उनले कार्ड त दिए तर, कार्डको पछाडिको म्यासेजले आफूहरुको सम्बन्धबारे कस्तो म्यासेज दिन्छ भन्ने सोचेनन् । अहिलेसम्म मेरी साथीलाई उनीहरुको सम्बन्ध बारे केही थाहा थिएन । उनी सोच्न अनि चासो राख्न बाध्य भइन्, यो के हो त ? मेरी साथि ठोकुवा गरेर भन्छिन्, ‘यस्तो लेख्ने त्यो अर्धबैसे मान्छे राम्रो नियतको होइन, यसले ती दिदीलाई साच्चै माया गरेको हुन्थ्यो भने छिमेकीको हातमा दिएको कार्डमा यस्तो लेख्दैनथ्यो् ।’
खै कसरी दिने प्रेमको परिभाषा । कोमल अनि सफा मनले गरिएको मायाले पछि गएर अपराधका भयानक रुप देखाउँन थालेको पाइन्छ समाजमा । भनिन्छ, प्रेममा त्याग हुन्छ, त्याग्न सक्नुपर्छ अनि आफ्नो साथीको खुसी उसलाई छोड्नुमा छ भने उसको सुखमय जीवनको कामना गरेर टाढाबाट पनि सहयोग र सद्भाव बढाउन सकिन्छ । तर, आजभोलीको प्रेम ‘आज छ भोली छैन ।’ माया गरेको व्यक्तिले भोली भिडको वीचमा उसैको कुरा गर्दै हिड्छ । उसलाई यहाँ घुमाए, यस्तो गरे, उस्तो गरे, यस्तो खुवाए, यसरी पैसा फसाए ।’
कतै चिया पसलमा एक व्यक्ति भन्दै थिए । मैले माया गरेको केटी अर्कोलाई माया गर्न गइछ । अनि मैले पनि छोडिदिए । त्यहाँ गलल्ल हाँसो छुट्यो । ‘तपाइले त्यो केटीका लागि यति गरेको हो व्युटीपार्लरको पैसा समेत तपाइले तिरिदिनु पथ्र्यो ।’ उसले भन्यो,‘ हो नि डुबाएर छाडी ।’
यदि त्यो व्यक्तिले साँचो माया गरेको हुन्थ्यो भने ती केटीका बारेमा यसो भन्थेन । उ कतै गइसकेको भए पनि केही बाध्यता थियो होला भनेर भन्न सक्थ्यो । तर उसले आफूले प्रेम गरेकी भनेकी युवतीलाई सबैका सामु उडायो । त्यहाँ उसले ती युवतीलाई मात्र उडाएन । आफ्ना कुरा निकालेर आफूपनि पंगु बनेको पत्तो पाएन ।
हुन त सबैको निजी जिन्दगी पनि हुन्छ । कसैको निजी जिन्दगीमा अरुले चासो राख्न जरुरी पनि हुँदैन् । तर निजी जिन्दगीमा गरिएका कतिपय व्यवहारले आफ्नो जिन्दगी मात्र नभएर परिवारको जिन्दगी पनि तहस नहस बनाउँछ । कसैले भनेको थियो, ‘तिमी आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर बाटोमा हात हल्लाएर हिड्दा अरुलाई तिम्रो हातले छोएर असर गरेको त छैन ।’
हो, मोबाइल किन्ने पैसा हाम्रो मेहनतले कमाएको हो । मोबाइल बेच्ने कम्पनीले पैसा लिएर मोबाइल बेचेको हो । घरमा सबैका आ–आफ्नै मोबाइल हुन्छन् । मोबाइलमा प्रयोग गर्ने सामाजिक संजाल फेसबुक, भाइवर, ह्वाटसप, इमो आफूले चलाउने हो र आफूले मात्र सम्झने गरी पासवर्ड राखेर कसैले थाहा नपाउने गरी चलाउने वस्तु पनि हो । तर, त्यहि बस्तुमा आधारीत रहेर व्यक्तिगत मानेर गरिएका गतिबिधिले आफ्नो जीवन मात्र नभएर घर परिवार, साथीभाइ, समाज अनि देशमा कस्तो असर पारिरहेको हुन्छ र कस्तो म्यासेज गएको हुन्छ भनेर सबैले ख्याल गर्न उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यी साधनहरुबाट देश दुनियाको खबर, संपर्क र मानव सभ्यतामा योगदान पुयाउने काम पनि हून्छन ।
प्रेम कि आशक्ति यस्तो बिषयमा गम्भीर संवेदनशील हुन सक्नै पर्दछ । यसलाइ ठिक ढंगले बुझन नसक्दा र सम्हालिन नसक्दा समाजमा धेरै अराजकता बढेको छ । संयमित र मर्यादीत हुन नसक्दा नै प्रेमी नामका आशक्तिले त्यस्तो उपद्रो गरे होलान् मैले मेरो साथीलाइ सुझाउन पनि भने ।